Agaasimaha Guud ee Boosaha Oo Kormeer Ku soo maray wasaaradiisa | Somaliland.Org
Agaasimaha Guud ee Boosaha Oo Kormeer Ku soo maray wasaaradiisa
July 20, 2013	HARGEYSA (Somaliland.Org)-Agaasimaha Guud ee wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta Md faysal Cali Sheekh ayaa maanta kormeer hawleed ku soo maray xarumaha iyo dhismayaasha kale ee ay wasaaraddu ku leedahay Magaalada Caasimadda ah ee Hargaysa.
Agaasimaha oo uu kormeerkiisa ku wehelinayey agaasimaha waaxda isgaadhsiinta ee wasaaradaasi ayaa waxa uu soo maray goobo ay ka mid ahaayeen Xarunta laliska, Xaruntii hore ee Boostooyinka ee duleedka saldhiga dhexe iyo rugta Taawarada, goobahaas oo badankoodu aan shaaynin isla markaana ay degan yihiin qoysas kala duwan, halka sidoo kalena uu u kuurgalay xafiisyada xarunta dhexe ee wasaaradda oo hadda uu ka socdo dhisme lagu hagaajinayo gidaarka sare ee dhismaha wasaaradaasi.
Md faysal oo warbaahinta kula hadlay goobaha uu kormeerayey ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay diyaarinayaan qorshe cad oo lagu diiwaanmgelinayo laguna xafidayo deegaamada ay wasaaraddu leedahay, isla markaana kormeer kuwan la mid ah lagu soo samayn doono xarumaha ay wasaaraddu ku leedahay Gobolada dalka.
Sida la ogyahay Agaasimaha guud ee wasaaradda Boostada iyo isgaadhsiinta Md faysal cali Sheekh oo xilkaasi la wareegay maalinimadii Arbacada ee Todobaadkii ina dhaafay ayaa kormeerkiisani waxa uu noqonayaa shaqadiisii ugu horaysay ee uu wasaaradaasi kaga hawlgalo.
Previous PostSomaliland came from a long way for these achievements of todayNext PostBoqor Raabi Iyo Cuqaal Naqdiyay sharciyadda Golaha la baxay wada tashiga	Blog